बाबुरामको प्रश्न , दीपक मनांगे जस्ता “बौद्धिक”भएको “कमाउनिष्ट”पार्टीमा अरू बौद्धिकहरू पनि आवस्यक पर्छ र ? - Onlinesamaya.com
असार २०, काठमाडौँ । पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा नेकपाले समाजवादी पार्टीका नेताहरुलाई पार्टी प्रवेश गरायो । सोहि पार्टी प्रवेश गराउने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई नै नेकपामा आउन आग्रह गरे ।
उनले बाबुरामको वौद्धिकताले अरु पार्टीका गएर सकारात्मक परिणाम दिन नसकेको टिप्पणीसमेत गरे ।
‘बाबुरामजीको वौद्धिकताले अन्त गएर कहीँ त्यसले सकारात्मक परिणाम दिएको देखिँदैन । कम्युनिष्ट आन्दोलनसँग जोडिएर मात्रै उहाँको बौद्धिकताको अर्थ हुने हो । उहाँको पीएचडीको अर्थ त्यहीँ हुने हो’ उनले भने ।
तर बाबुरामले भने प्रचण्डको उक्त भनाइको जवाफ ट्विटरमार्फत फर्काएका छन् । उनले लेखेका छन् ‘कमरेड दीपक मनांगे जस्ता “बौद्धिक”भएको “कमाउनिष्ट”पार्टीमा अरू बौद्धिकहरू पनि आवस्यक पर्छ र ?
स्मरण रहोस नेकपाले बिहीबारमात्रै आपराधिक पृष्ठभूमिका दीपक मनाङेलाई पार्टी प्रवेश गराएको थियो ।